त्यहि आमा हो, दुखमा पनि हाँसेर तिमिलाई हँसाउन खोज्ने - आमाको माया (भिडियोसहित) - ज्ञानविज्ञान
कुनै एकान्त ठाउँमा गएको बेला आमा सम्झे मन रुन्छ । बढी न्यास्रो लाग्छ अनि आमाभन्दा आँसु र्झछ । नजिक भए खुसीका अनि टाढा भए वेदनाका आँसु र्झछन् । त्यो आमाप्रतिको गहिरो प्रेम भएर नै हो। एक विश्वचर्चित व्यक्ति एवं अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका छन्-’आमाको काखमा भएको मान्छे कहिल्यै दुःखी हुँदैन । आमा प्रेम र विश्वासको बास्केट हो, एउटा सन्तानको लागि ।
एउटा भनाइ छ-’प्रेम र विश्वासको बास्केटमा हिंसाले कुनै ठाउँ पाउँदैन ।’ आमाबाट हिंसा हुने कुरा कल्पना बाहिर हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने आमा छोडेर कतै गएमा एक्लो वा केही न केही अभाव भएजस्तो महसुस हुन्छ । आमा संसार हो। संसारमा सबै कुरा पाइन्छ तर आमा पाइँदैन । आमा सन्तानको ढुकढुकी हो। बालबालिकाको आशा र भरोसा हो । अनि समाजको गहना हो । आमाबिनाको परिवार खल्लो हुन्छ ।
आमाको बारेमा शब्दमा भूमिका बाँधेर केही लेखेरमात्र पुग्दैन । यसको वर्णय गरी साध्य छैन । आमाबिनाको जीवन पानीबिनाको माछाजस्तै हुन्छ । जहाँ आमा, त्यहाँमात्र राम्रो सपना देख्न सकिन्छ । आमाबिनाको जीवन मरुभूमिजस्तै हो। जहाँ मनले खुसी हात पार्न सक्दैन। आमा सन्तानको लागि महादेवता हुन् । आमाको बारेमा मातातीर्थ औंसीको दिनमात्र गुणगान गाएर आमाको भलो हुँदैन । आमालाई हेला गर्ने सन्तानलाई कुनै न कुनै समयमा नराम्रो आइलाग्छ ।
आमाको ओठमा सधैँ हाँसो दिन सक्नु नै सन्तानको सबैभन्दा ठूलो धर्म हो । जहाँ आमा त्यहाँ सधै घामछाँया हुन्छ । आमाको सक्रियता सन्तानको भाग्य र भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छ । आफूले खाई नखाई आफ्नो सन्तानलाई मीठो मसिनो खान दिने आमाको कर्त्तव्यप्रति कसैको गुनासो रहँदैन । आफूले निल्नै लागेको गास पनि सन्तानलाई दिन उत्साहित हुन्छन् ।
कैयौं पीडा सहेर जन्म दिने भनेकै आमाले हो । आफ्नो दशधारा दूध पिलाएर नाना ताते गर्दै हुकाउने पनि आमाले हो । सबैभन्दा पहिलो माया साटासाट गर्ने वर्ग पनि आमा नै हो । पिठ्यँूमा घाँसपातको भारी अनि भारीमाथि नानीबाबुलाई बोकेर घरगोठ गराउने पनि आमा नै हुन् । बालकको चौतर्फी विकासको विषयमा गहिरो व्यवहारिक चिन्तन दर्शाउने वर्ग पनि आमा नै हो ।
आमालाई जवानीमा त्यति धेरै माया दिने नदिने सन्तानको कुरा हो तर साथ दिनु पर्दछ । जब आमा कमजोर हुँदै जान्छिन्, आमाको हेरविचार एवं स्याहार सहयोगमा कत्ति पनि कमी आउन दिनु हुँदैन । भनाइ छ, अरुको लाखभन्दा आमाको काख नै प्यारो हुन्छ । संसारको सबैभन्दा रमाइलो समय भनेको आमाको फरियामा बेरिदा एवं काखका कोकोहोलो गर्दा हुन्छ । आमाले यस संसारमा जन्म दिनुभएको छ । त्योभन्दा ठूलो आमाको महिमा गर्ने अरु केही छैन ।
आमा जीवनको ज्योति हो। मायाको सागर हो । जीवनको पहिलो प्रभावकारी ज्ञानरुपी पाठशाला पनि हो । तसर्थ हिजोका दिनमा स्याहार गर्दागर्दै शिथिल आमाको जीवनलाई सुखी स्वास्थ्य र सम्पन्न बनाउन जीवनको महत्वपूर्ण पाटो आमाको बुढेसकालको सहाराको लागि खुसीसाथ खर्च गर्नैपर्छ । पूर्ण रेखदेख एवं लालनपालन गर्ने काम सन्तानको हो । तसर्थ सबै सन्तानले आफ्ना जीवनदातालाई उच्च सम्मान एवं रेखदेखका साथ पालनपोषण गर्न कम्मर कसेर लाग्नु पर्दछ ।
को हुन् ‘आमा’ चिन्ने की ?
जीवनमरणको दोसाँधवाट उम्केर आफ्ना सारा ईच्छा, चाहना र भावनालाई कुल्चिएर सन्तानको सदासदा भलो चाहने तिम्रो आमा । प्रसवको वेदनामा आफ्नो भन्दा पेटवाट बाहिरी संसारमा आउन चाहने तिमिलाई ख्याल गर्ने तिम्री आमा ।
सुत्केरी अवस्थामा जुवानोको झोल नपाएपनि दुध नआएपनि मातृस्पर्शमा टाँसेर तिम्लाई भुलाउन भएपनि दुधको लाम्टो चुसाउने तिम्री आमा । आफुले फाटेको, टालेको वा पुराना लुगा लगाएपनि सन्तानले राम्रै लगाओस भन्ने पवित्र भाव व्यक्त गर्ने तिम्री आमा । त्यस कारण तिम्ले बिर्सेर पनि आमालाई भुल्न, अपमान गर्न मिल्दैन् ।
बाबुले के गरिस्, कति कमाईस् भनेर सोध्दा आमाको मुखवाट नानी आज खाईस् खाईनस्, के खाईस्, कतिबेला खाईस् जस्ता मायालु मातृत्व झल्कने शब्दावली तपाईमा पनि पोखिएको छ होला ? जुनसुकै विषयलाई हल्का रुपमा लियौ भने त्यो वस्तुको वास्तविक महत्व चाल पाईदैन् ।
आमा शब्द र भूमिकालाई पनि सतहि रुपमा लिदा खासै केहि होईन् तर भूमिका विश्लेषण गर्ने हो भने तपाईलाई पनि आत्मा देखि नै हो, आमा भनेको त वयान गरेरै सक्दिन जस्ता शब्द छताछुल्न हुन पुग्ला ।
तिम्ले पैसाले धेरैथोक किन्न पाईएला तर आमा किन्न पाईएला र ? सहनशीलताको प्रतिमुर्ती आमा बाहेक अरु के हुन सक्छ र ? आमा मायाको खानी मात्र होईनन्, शिक्षाको पहिलो र संसार देखाउने गुरु हुन् । आमा संसारकी श्रेष्ठ र सृष्टीकर्ता मात्र कहाँ हुन् र ? उनी त आर्दशको प्रतिमुर्ती पनि हुन् ।
सर्वगुणी आमा कर्तव्यकी मुहान मात्र होईनन्, कल्याणकी देवी पनि हुन् । भनिन्छ, आमाको आँशु जीवनकै ठूलो पाप ठानिन्छ । यति भनिसकेपछि आमा को हुन् चिन्न गाह्रो छ र ?
तर अचेल आमा आफ्नै श्रीमान् र सन्तानवाट हेलामा पर्न थालीएको छ । तिमिलाई जन्मायो, हुर्कायो, जिम्मेवार बनायो तर बुढेशकालमा आमा बेसाहारा बन्दै बलिन्द्रधारा आँशु झार्न बाध्य बनेकी छिन् ।
आमाहरुकै लागी भनेर विभिन्न गाउँशहरमा बृद्धाश्रमको योजना तथा भवन निर्माण हुदैछ । बुढेशकालमा साहारा चाहिनेबेलामा आमालाई उहि एक्लोपनको उपहार दिने संस्कार मौलाउदैछ । यस तर्फपनि आमाका सन्तानहरुले गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
आमावाट मायाको वास्तविक अर्थ बुझ्न, असल शिक्षा र संस्कार आर्जन गरी सभ्यता सहित हिड्न खोज्नु सन्तानको मुख्य कर्तव्य हो । आमावाट आशिर्वाद थाप्न र आमाको पुजा गर्न कहिल्यै नबिर्सनु ।
आमाको दुश्मन र आमाको चित्त दुखाउने काम पनि असल सन्तानले गर्नु उचित मानिदैन् । त्यसकारण लाग्छ, हजारवटा जिब्रो भएका शेष नागले वयान गरेपनि आमाको वयान गर्न सकिदैन् । आमाको गुन यो जुनीमा तिम्ले तिर्न नसकेपनि आमाको गुन तिर्न हरेक पलपलमा सम्मान गर्न सिक ।
Don't Miss it भुटेको मकै खानुका यति धेरै फाइदा, क्यान्सरको खतरा समेत कम गर्छ – जानिराखौँ
Up Next सास गन्हाउने समस्या छ भने एसो गर्नुहोस्
19 hours ago Pradeep Karki
बच्चालाई स्तनपान गराउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
-कहिलेकाहीँ स्तनपान गराउँदा निप्पल दुख्न सक्छ । यस्तो समस्या भएमा स्तनपान गराउनुअघि स्तनमा घिउ लगाउनुपर्छ । घिउ लगाउने बानीले लामो…
यस्ता कुरामा मर्निङ वाकमा जाँदा ध्यान दिनुपर्छ
१. समाचार नसुन्ने: मर्निङ वाक गर्दा धेरैले रेडियोमा समाचार सुन्दै हिँडेको पाइन्छ। तर, मर्निङ वाकमा यसलाई राम्रो मानिँदैन। समाचारमा लडाइँ,…